Ihe Nsonaazụ Ajọ Ifufe Harvey | Netwọk Mgbasa Ozi
Ihe Nsonaazụ Ajọ Ifufe Harvey
Ajọ Ifufe Harvey, hụrụ site na satịlaịtị
O meela otu izu kemgbe anyị dere banyere ajọ ifufe nke nwere ike ibute Texas, ajọ ifufe. Ọbụna ọ ruru ụdị 4, ike karịrị nnọọ atụmanya. Mmebi ọ hapụrụ ahapụ karịrị nke a tụrụ anya ya. Ma mgbe niile oge a na-apịa ihe n'ógbè ahụ ga-aga n'ihu na-aga n'ebe ugwu dị ka oké mmiri ozuzo na-ekpo ọkụ maka ụbọchị ole na ole sochirinụ.
Mmebi mepụtara abụwo n'ihi nnukwu akụkụ Mgbanwe Harvey na mpaghara ahụ, nọrọ ogologo oge n’otu ebe. Njem a pụrụ iche mere ka idei mmiri ahụ sie ike na Houston, ruo n'ókè nke na-eti ihe ndekọ nke idei mmiri tara ahụhụ na kọntinent United States. Ihe ndekọ nke gara aga bụ Hurricane Amelia mepụtara na 1978, yana oke mmiri ozuzo nke 48 sentimita asatọ. Harvey ruru 51,88 sentimita (karịa 1,30 mita) na Tuesday, a na-atụkwa anya mmiri ozuzo ọzọ.
1 Visitsda na-eleta mpaghara ahụ metụtara
1.1 Ọdụ mmiri nke jubigara ókè
2 Coldplay mejupụtara "Houston" na nsọpụrụ nke ndị emetụtara
Visitsda na-eleta mpaghara ahụ metụtara
Standsda na-anọgidesi ike na ndị niile metụtara mpaghara ahụ (NBC News)
Naanị mgbe ụda na-eleta mpaghara ahụ metụtara, ọdọ mmiri abụọ rijuru afọ ụnyaahụ. Nsonaazụ nke Harvey na oke iwe na mpaghara ahụ dị ka a ga - asị na ọ nweghị mgbe ọ ga - agbanahụ, manyere ịhapụ otu mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ nke Houston, mpaghara kachasị emetụta.
Ọnụ ọgụgụ ahụ ebililarị ruo mmadụ iri na isii nwụrụ, puku kwuru puku ndị mmadụ napụtara, na iri puku kwuru iri puku napụrụ ebe ahụ, ọtụtụ ndị Houston ebe, ugbu a idei mmiri. Ọ bụkwa obodo nke anọ ndị mmadụ kacha biri na United States, nke nwere ihe karịrị nde mmadụ abụọ bi na ya. Ihe mmebi emebigorịrịrị karịa ogo mbibi Hurricane Katrina kpatara na 2, nke mekwara n'etiti August 2005 na 23.
Nke a nwere epic n'ike-n'ike. Onweghi onye hụtụrụla ihe dị ka ya »Okwu ndị a bụ okwu Donald Trump kwuru n'ọgbakọ ahụ emere na Corpus Christi, nke Gọvanọ Texas, Greg Abbot nọ n'isi ya. Onye isi ala United States ejirila ohere ahụ mara ma tokwa ọrụ ndị ahụ na-emekọ ihe ọnụ na enyemaka nke ndị ihe a metụtara. Ọ na-agba anyị ume ma na-agba anyị ume ka anyị mee ya "karịa mgbe ọ bụla", nke mere na n'ime afọ 5 ma ọ bụ 10, enweghị ike ịsị na ọ bụghị ihe niile ka emechara. E nyere ụfọdụ onyonyo panorama na vidiyo vidio FOX a. Ọzọkwa, Ọ na-ekwukwa banyere nsogbu nke ọrịa ndị nwere ike ịnwe, pests dị ka anwụnta, nfụkasị, wdg.
Ọdụ mmiri nke jubigara ókè
Nsonaazụ nke oke mmiri ahụ, Barker na Addick dams, pụtara ìhè na onyonyo ndị a. Nke ukwuu nke mere na Mlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ihu Igwe na-etinyekwu agba abụọ na map nke na-atụle mmiri ozuzo. Na akụkọ ihe mere eme, a na-etinye map ahụ na sentimita 15 nke mmiri ozuzo, site ugbu a gaa na okpu ọhụrụ ga-abụ sentimita 30. Anyị nwere ike ịhụ ọdịiche dị na nha na maapụ nke gosipụtara site na nkeji 1: 20 nke vidiyo ahụ.
Mmiri ozuzo a na-atụ anya na mpaghara ahụ bụ ihe dị ka sentimita 5 kwa ụbọchị maka 2/3 karịa ụbọchị. Osimiri ahụ bụ akụkọ ihe mere eme, dịka idei mmiri. A na-atụ anya na, na mgbakwunye na ọnụ ọgụgụ ndị ahụ metụtara, na na-esote ụbọchị ihe dị ka mmadụ 450.000 rịọrọ enyemaka maka ịchọta nsonazụ nke nsonaazụ.
Coldplay mejupụtara "Houston" na nsọpụrụ nke ndị emetụtara
Ndị otu egwu Britain, raara egwu akpọrọ "Houston", kpọrọ ya nke mbụ na nke ikpeazụ ya na egwu na Miami, Florida. "Anyị tolitere egwu obodo na-ahụ n'anya, nke ahụ bụ ihe anyị na-eche banyere mgbe anyị gara Texas"kwuru Coldplay onye ọbụ abụ-onye na-abụ abụ obi ụtọ n'oge egwu ahụ.
Ọtụtụ puku mmadụ etinyela aka na enyemaka ahụ, na akụkọ ụfọdụ agaghị ama ama. Ọbụna onye nta akụkọ kwụsịrị ụgbọala ndị uwe ojii iji nyere onye ọkwọ ụgbọ ala na-enweghị ike isi n'ụgbọala ya pụta. N'ikpeazụ enwere ike ịzọpụta nwoke ahụ, na-enye ekele na ekele maka ihe ha meere ya.
Anyị na-ekwu ọfụma ịhapụ ịse egwu nke egwu a site n'aka Coldplay site na ọwa gọọmentị ha. Site ebe a anyị na-atụ anya na nnukwu obodo a ebe e zigara gị na mbara igwe, na-agbake dị ka nke kachasị mma na ngwa ngwa o kwere mee.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ihe Nsonaazụ Ajọ Ifufe Harvey
Osimiri Mansilla na-ahapụ obodo nke ụkọ mmiri ozuzo kpuchiri
Etu esi gbakọọ ikuku ikuku?